Vatongi 15 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
15 Zvino kwapera chinguva, mumazuva okukohwa gorosi, Samsoni akashanyira mudzimai wake aine mbudzana.+ Naizvozvo akati: “Ndichapinda mune mudzimai wangu muimba yomukati.”+ Asi baba vake havana kumubvumira kupinda. 2 Baba vake vakati: “Chaizvoizvo ndakati, ‘Chokwadi unofanira kuva unomuvenga.’+ Nokudaro ndakamupa muperekedzi wako.+ Munun’una wake haasi nani kupinda zvaari here? Ndapota, ngaave wako panzvimbo pomumwe wacho.” 3 Zvisinei, Samsoni akati kwavari: “Iko zvino handisi kuzova nemhosva nevaFiristiya kana ndikavaitira zvinovakuvadza.”+ 4 Zvino Samsoni akaenda, akabata makava+ mazana matatu, akatora mazhenje omoto, akasunganidza miswe yacho akaisa zhenje romoto rimwe pakati pemiswe miviri, pakati chaipo. 5 Adaro, akabatidza mazhenje omoto, akaaregedzera muminda yaiva nezviyo zvakanga zvisati zvakohwewa zvevaFiristiya. Nokudaro akapisa zvinhu zvose nomoto kubvira kuchisote kusvikira kuzviyo zvakanga zvisati zvakohwewa neminda yemizambiringa neminda yemiorivhi.+ 6 Zvino vaFiristiya vakatanga kuti: “Ndiani aita izvi?” Vakabva vati: “NdiSamsoni mukuwasha womuTimna, nokuti akatora mudzimai wake, akamupa muperekedzi wake.”+ VaFiristiya vakaenda vakapisa mukadzi wacho nababa vake nomoto.+ 7 Samsoni akatiwo kwavari: “Kana mukaita zvakadai, hapana zvandingaita kunze kwokuti ndizvitsive pamuri,+ uye pashure ndicharega.” 8 Zvino akauraya vakawanda kwazvo, achiunganidza makumbo pamusoro pezvidya, achibva aenda, akatanga kugara mumukaha weibwe reEtamu.+ 9 Gare gare vaFiristiya+ vakauya, vakadzika musasa muJudha,+ vakafamba-famba muRehi.+ 10 Varume vaJudha vakabva vati: “Nei mauya kuzotirwisa?” ivo vachibva vati: “Tauya kuzosunga Samsoni, kuti timuitire sezvaakatiitira.” 11 Naizvozvo varume vaJudha zviuru zvitatu vakaenda kumukaha weibwe reEtamu+ vakati kuna Samsoni: “Hauzivi here kuti vaFiristiya vari kutitonga?+ Nokudaro izvi zvawatiitira zvinorevei?” Akabva ati kwavari: “Zvavakandiitira ndizvo zvandakavaitirawo.”+ 12 Asi vakati kwaari: “Tauya kuzokusunga, kuti tikuise muruoko rwevaFiristiya.” Samsoni akati kwavari: “Ndipikirei kuti imi hamuzondirwisi.” 13 Ivo vakati kwaari: “Aiwa, asi tichangokusunga chete, tokuisa mumaoko avo; asi chokwadi hatizokuurayi.” Naizvozvo vakamusunga netambo itsva mbiri+ vakamubudisa muibwe racho. 14 Iye akasvika kuRehi, vaFiristiya vakashevedzera nomufaro pavakasangana naye.+ Zvino mudzimu waJehovha+ wakashanda paari, tambo dzaiva pamaoko ake dzikava seshinda dzerineni dzatsva nomoto,+ zvokuti zvisungo zvake zvakanyunguduka pamaoko ake. 15 Zvino akawana pfupa nyoro reshaya yembongoro hono, akatambanudza ruoko rwake, akaritora, akauraya varume chiuru naro.+ 16 Samsoni akabva ati: “Nepfupa reshaya yembongoro hono—murwi mumwe, mirwi miviri! Nepfupa reshaya yembongoro hono ndauraya varume chiuru.”+ 17 Paakapedza kutaura, akabva arasa pfupa reshaya raiva muruoko rwake, akatumidza nzvimbo iyoyo kuti Ramati-rehi.+ 18 Zvino akava nenyota kwazvo, akatanga kuchema kuna Jehovha akati: “Ndimi makapa ruponeso urwu rukuru muruoko rwomushumiri wenyu,+ zvino ndofa nenyota uye ndowira muruoko rwevanhu vasina kudzingiswa here?”+ 19 Naizvozvo Mwari akatsemura gomba rakaita seduri raiva muRehi, mvura+ ikatanga kubuda mariri, akanwa, pashure simba+ rake rikadzoka, akararamazve.+ Ndokusaka akaritumidza kuti Eni-hakore, riri muRehi kusvikira nhasi. 20 Akaramba achitonga Israeri mumazuva evaFiristiya kwemakore makumi maviri.+